Archive du 20170220
Ambatobe Karana mpianaka nisy nitifitra...
andriaka ny ra teny Ambatobe omaly tolakandro. Karana lahy mpianaka, 43 taona sy 5 taona eo, no naratra mafy nisy nitifitra tao anaty fiara kely nentin�izy ireo hamonjy fodiana eny amin�ny R�sidence
Augustin Andriamananoro Tsy re feo intsony
Ny 27 desambra 2016 teo no nivoaka ny fonjan'Antanimora rehefa notanana 17 andro tao ny filoha lefitry ny vondrona Mapar Augustin Andriamananoro. Tsy re feo intsony izy nanomboka teo.
COMTIM Ivato Tratran�ny antsojay tamin�ny ora farany
Nifamotoana teny Ilaivola ny sabotsy 18 febroary 2017 teo ireo mpikambana Tiako I Madagasikara ao anatin�ny kaominina ambanivohitra Ivato.
Ady anatin�ny HVM Mamono afo i Rivo Rakotovao
Niezaka nandiso ny resaka momba ny ady an-tranon�ny antoko HVM ny filoha nasionaliny Rivo Rakotovao ny faran�ny herinandro teo.
Taratasin�i Jean Ampiana foana
Miarahaba anareo indray aho ry Jean malala ! Mbola velom-pisaorana anareo ihany koa manome fahazarana anay handray lalandava fanampiana amin�olona e !
Fanalam-baraka anaty facebook Mpanao politika iray hogadraina ?
Mbola mitana ny sain�ny maro ny raharaha Hiary Rapanoelina, nampidirina am-ponja vonjimaika noho ny tsy fahafehezany ny vondrona facebook �Fifosana hanatsarana ny pipoles Gasy�,
Fidangan�ny faktiora Misy hadisoan�ny JIRAMA
Mitaraina ny isan-tokantrano amin�ny fidangan�ny faktioran�ny JIRAMA amin�izao fotoana izao.
�Face � face� tao amin�ny Radio Haja Niboredika ny ben�ny tan�nan�Antsirabe
Nahaliana ny mpanara-baovao tao Antsirabe ny adihevitra nivantana tamin�ny haino aman-jery, Radio Haja Antsirabe nifanaovan�ny mpanolotsaina sy ny Ben�ny tan�nan�Antsirabe ny harivan�ny zoma 17 febroary lasa teo.
Raharaha Jean Nirina HAFARI Nanatsoaka ny fitoriany i Joella
Rahaharaha anisan�ny hitazonana am-ponja an�i Jean Nirina Rafanomezantsoa, filohan�ny Fikambanana HAFARI Malagasy ny resaka fitazonana an-keriny an�i Joella ny 22-23-24 desambra 2015.
Ankizy maherin�ny 800.000 Tsizarizary sakafo any atsimo
Kaominina 7 any amin�ny faritra Androy sy Anosy amin�izao fotoana izao no iharan�ny tsy fanjarian-tsakafo, raha ny fanazavana nomen�ny filohan�ny fifanampiana Malagasy, Randrianalison Andrianomentsoa, tetsy amin�ny biraony etsy Ampandrana ny sabotsy teo.
Kaominin�i Talatavolonondry Midina mitety fokontany mitaky hetra
Tena nalaina tanteraka tamin�ny fandoavan-ketra ny mponina tao Talatavolonondry nanomboka ny taona 2009 no ho mankaty, raha araka ny fanazavan�ny Ben�ny tan�na Rakotondrafaraniaina Martin.
Boriborintany faha-4 Fanatanjahantena no iadiana amin�ny zava-mahadomelina
Arovana tsy hirona amin�ny fifohana sy fidorohana zava-mahadomelina ireo tanora ao amin�ny Boriborintany fahefatra.
Miesona tanteraka !
Hain�ny mpitondra eto amintsika ny mipasoka sy mandamin-dresaka momba ny zava-misy eto amin�ny firenena,